Izici eziyi-10 Ezilahlekile Kubhulogi Yakho | Martech Zone
Izici eziyi-10 Ezilahlekile Kubhulogi Yakho
NgoLwesibili, ngoJulayi 21, i-2009 ULwesine, April 28, 2016 Douglas Karr
Ezinye ze impendulo engiyitholile evela kubafundi ngukuthi bengingahlinzeki ngempendulo eningi mayelana nokubhuloga ku Martech Zone. Ngakho-ke - namhlanje ngicabange ukuthi ngizothatha enye indlela futhi ngibheke ubuchwepheshe obuzungeze uhlelo lwakho lokubhuloga ukuhlinzeka abafundi ngohlu lokuhlola lwezici okufanele bazibukeze futhi baqinisekise ukuthi ibhulogi yabo inayo.
robots.txt - Uma uya empandeni (ikheli lesisekelo) lesizinda sakho, engeza robots.txt ekhelini. Isibonelo: https://martech.zone/robots.txt - kukhona ifayela lapho? Ifayela le-robots.txt yifayela lezimvume eziyisisekelo elitshela i-injini yokusesha i-bot / spider / crawler ukuthi yiziphi izinkomba ezingazinakwa nokuthi iziphi izinkomba okufanele zikhase. Ngaphezu kwalokho, ungangeza isixhumanisi kumephu yakho yesayithi kuyo! Awunayo? Vula incwajana noma i-textpad bese uyenza ngokwakho… vele ulandele imiyalo Robotstxt.org
Sitemap.xml - Imephu yesayithi ekhiqizwe ngamandla iyinto esemqoka enikezela izinjini zokusesha nge imephu ukuthi okuqukethwe kwakho kukuphi, kubaluleke kangakanani, nokuthi kugcine nini ukuguqulwa. Umkhiqizi wemephu yesayithi omuhle kunabo bonke engake ngasebenzisa i- I-XML Sitemap Generator ka-Arne Brachhold. Iphinde ithumele imephu yesayithi ku-Live / Bing, Yahoo!, Google and Ask! (lapho isevisi yokufaka kwe-Ask isebenza).
I-Social Media Flair - Nginohlu oluphelele lwamasayithi lapho ungangithola ngihlanganyela ezinkundleni zokuxhumana. Khumbula - ibhulogi yakho ayihlali njalo lapho umuntu othile eya khona! Kwesinye isikhathi ukuxhumana ezinkundleni zokuxhumana nokwenza ubungane nalabo abanezintshisekelo ezifanayo kungasiza ukukhuphula ibhulogi yakho izethameli ezifanele… kungabikho kubhulogi yakho. Kubha eseceleni ephezulu ngakwesokudla, uzothola amasayithi amaningi lapho ungangithola khona! Qiniseka ukuthi ungangeza njengomngani, ngizobuyisela umusa wami.
Ukuhambisana Kwamaselula - Ukusetshenziswa kwe-Intanethi ngeSelula kuyakhula! Ngabe ibhulogi yakho iyafundeka kusikrini eselula? Okwe-WordPress, kune-WordPress Mobile Plugin ekahle eyenza ukuthi isayithi elungiselelwe ukusetshenziswa kweselula ne-iPhone Safari.
Incazelo - Uma ngingahlala kwelinye lamakhasi wakho owodwa webhulogi yakho, bengingazi ukuthi kwakumayelana nani? Kwesinye isikhathi kunzima ukusho kalula ngokufunda okuthunyelwe. Ukuba nencazelo enhle kubha yakho eseceleni yokuthi hlobo luni lokuqukethwe olunikezayo kungabalulekile ekwenzeni abafundi babhalise noma babuye.
Ifomu lokuxhumana - Ngiyamangala ngenani lamabhulogi angenazo izindlela ngaphandle kwenkambu yokuphawula ukuxhumana ne-blogger! Unesixhumanisi sokuzulazula esikhomba kwifomu lokuxhumana? Amafomu wokuxhumana awathikamezi kakhulu kunenombolo yocingo futhi awukubeki engcupheni njengokushiya ikheli le-imeyili phezulu.
Mayelana neKhasi - Ungubani futhi kungani kufanele ngikuthembe? Noma kuzwakala kuhlekisa ukubhala ikhasi elikhuluma ngempumelelo yakho… akuyona eyakho, eyabavakashi. Banikeze isiqondiso sokuthi kungani kufanele bakulalele.
Isithonjana - Ngokuza kweziphequluli ezinamathebhu, kulula kakhulu ukuhlukanisa ibhulogi yakho ngokungeza isithonjana. Uma ungazi ukuthi umane usebenzise kanjani I-Favicon generator ukwenza ifayela le-ico (icon) bese ulilayisha enkombeni yezimpande yewebhusayithi yakho. Amanye amafayela wesithombe angasetshenziswa futhi, noma izithombe noma izithonjana ezibanjwe kwenye indawo - vele ubuyekeze i- isixhumanisi sesithonjana sesinqamuleli kunhlokweni wakho.
Disclaimer - Yebo, ungamangalelwa ngalokho okushicilelayo kubhulogi yakho. Zivikele wena nempahla yakho ngokuqinisekisa ukuthi unakho okukhulu nesinqindi!
Ukuhlanganiswa Kwemidiya Yezenhlalo - Thumela nge Twitter nge I-Hootsuite, I-LinkedIn, Okubhaliselwe imeyili, I-Facebook nokuhlanganiswa kuyithuluzi elinamandla, sebenzisa ukuhlanganisa amandla amakhulu!
Tags: mayelana nekhasiincazelo yebhulogiifomu contactnesinqindiisithonjanaukubuka kweselularobots.txtIbalazweizinkinobho zenhlaloukuhlanganiswa kwabezindaba kwezenhlalo
Sula ku-Compendium Blogware?
Jul 22, 2009 ku-3: 58 AM
Siyabonga ngesixhumanisi nohlu olukhulu lwamathiphu. Unephuzu elifanele kakhulu mayelana nencazelo nesitatimende. ngizokungeza kubhulogi lami futhi 🙂.
Lolu uhlu oluhle. Ngiphethe i-athikili ebabazekayo ngesihloko esifanayo, ngizogingqa nalokhu futhi ngixhumanise nesikweletu.
Ngisanda kubuza ukuthi kunzima kanjani ukuthola imininingwane yokuxhumana kumabhulogi futhi angivumelananga nawe ngaphezulu. Yini inkinga enkulu? Ngemuva kwalokho - hawu - ngithole ukuthi anginayo indlela elula ngangeza.
Izeluleko eziningi ezinhle lapha, kanye 'nokuhlolwa' okuhle kwama-blogger. Ngiyabonga!
Ashish @ Magik Indikimba yendaba
Jul 14, 2011 ku-6: 58 AM
Amathiphu amahle uDouglas, ngicabanga ukuthi kufanele ungeze okulandelayo kuma-robots.txt akho
Umenzeli womsebenzisi: *
Ukubambezeleka kokukhasa: 10
# Umshini We-Internet Archiver Wayback
Umenzeli womsebenzisi: ia_archiver
# digg isibuko
Umenzeli womsebenzisi: duggmirror
Bheka irekhodi lakho lokungena bese Ungavumeli lezi zigcawu ngoba zintshontsha umkhawulokudonsa wakho futhi zenza isayithi lakho lingatholakali kubavakashi isikhashana.